वन्यजन्तु संरक्षणमा बर्दियाका युवाको उदाहरणीय काम – Tourism News Portal of Nepal
वन्यजन्तु हिँड्ने बाटोमा बाधा नपु¥याऊँ है..!’
वन्यजन्तु संरक्षणमा लागेको कदरस्वरुप उहाँले २०६१ सालमा डब्लुडब्लुएफको अब्राहमले संरक्षण पुरस्कार पनि प्राप्त गर्नुभएको छ । बाघसँग कस्तो मुठभेड भयो ? त्यसको सामना कसरी गर्न सक्यो ? यी कुरालाई झल्काउन उहाँले अङ्ग्रेजी चलचित्रमा बेलायतकी अभिनेत्री मेन्सीसँग अभिनयसमेत गर्नुभएको छ ।
निकुञ्जका छेउछाउका बस्तीमा जङ्गली जनावरले बेलाबेलामा निकै दुःख दिन्छन् । कहिले घरबार भत्काइदिने त कहिले मानिसको ज्यानै लिइदिने । तर पनि यहाँका मानिसको ती जनावरप्रतिको मोहमा परिवर्तन नभएको अधिकृत थापाको भनाइ छ । भदयी र कृष्णलाई जङ्गलमा जाँदा बाघका पाइला मात्र देखिएन भने आजभोलि न्यास्रो लाग्छ रे ! भदयी भन्नुहुन्छ – “म दिनहुँ जङ्गल जान्छु । अनि बाघ कता कता गएछ भनेर हेर्छु । कुनै दिन उसका पाइला देखिनँ भने भारततिर गएछ कि सिकारीले फेला प¥यो भन्ने शङ्का उठ्छ ।”
सन् २०१५ को गणनाअनुसार बर्दिया रानीमा ५० भन्दा बढी वयस्क बाघ, एक सयभन्दा बढी जङ्गली हात्ती (जसमध्ये ५० वटा आवासीय छन् भने बाँकी खाता करिडोरबाट नेपाल–भारत ओहोरदोहोर गर्छन्) र ३६ वटा गैँडा छन् । बाघको नयाँ गणना चलिरहेकाले यो वर्ष बाघको सङ्ख्या अझ बढ्ने सम्भावना रहेको भण्डारीले बताउनुभयो ।